Roadzọ Azụmaahịa Oge A | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 6, 2012 Douglas Karr
Enwere m mmasị n'ịzụ ahịa na ihe ọ bụla ọ na-anọchite anya. N'uche m, ịre ahịa pụrụ iche n'ihi na ọ na - eweta ọtụtụ onyinye na ihe:
Omume mmadu - ịkọ omume ụmụ mmadụ na ịghọta ihe ha chọrọ na mkpa ha nke na-akpali omume ahụ.
creativity - na-abịa na echiche ndị ọhụrụ dị mfe ma maa mma, na-agwa ndị mmadụ ekele maka ịwa ahụ.
analysis - nyochaa ihe omimi nke data ichota ohere maka imeziwanye na nzaghachi di elu.
Technology - itinye teknụzụ iji tụọ, melite ma gbanye mbọ ahịa.
Anyị na-eru Golden Age nke ahịa ebe nkà na sayensị na-achọta na zuru okè njirisi. A na - ezute ikike iji mata ihe metric pụtara. Ihe data a abughi na ime ka mkpebi di nma karie, kamakwa ndi n’ere ahia ka ha nwekwuo obi ike, inwale, inyocha onu nke uzo a ma ama ma banye n’ime ndi ohuru. Site na Eloqua's Infographic, Roadzọ Azụmaahịa Oge A
Kedu ka anyị si bịa ebe a?
Tags: usoro ọmụmụakụkọ ihe mere ememarketingahịa akụkọ ihe mere emeahịa nke oge a